» यस्तो बन्दैछ फास्टट्रयाकः लक्ष्यको ९७ प्रतिशत काम सकियो, चिनियाँ टोली फिल्डमा (हालसम्म केके भयो ?)
यस्तो बन्दैछ फास्टट्रयाकः लक्ष्यको ९७ प्रतिशत काम सकियो, चिनियाँ टोली फिल्डमा (हालसम्म केके भयो ?)
२०७८ श्रावण ५, मंगलवार २१:३६
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडकमा सुरूङ निर्माणका लागि चिनियाँ टोलि फिल्डमा पुगेको छ । द्रुतमार्गमा सुरूङ बनाउने जिम्मा पाएका पोलि चाङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन फिल्डमा खटिएका हुन् ।
सुरुङमार्गको पहिलो प्याकेज चाइना स्टेट र दोस्रो प्याकेज पोलि चाङ्दाले बनाउने जिम्मा पाएका हुन् । सुरुङ्ग मार्ग इन्जिनियरिङ-प्रोक्युरमेन्ट-कन्स्ट्रक्सन मोडलमा निर्माण हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानबाट यी कम्पनी छनोट भएका हुन् ।
दुवै सुरुङ्ग ठेक्का प्याकेज कमेन्समेन्ट भइ चिनियाँ टोलि फिल्डमा मोबिलाइजेसन भएका हुन् ।
यता कोभिड १९ को दोस्रो लहरले गतिविधि प्रभाव पारेपनि वर्षिक लक्ष्य अनुरूप नै काम भएको सेनाले जनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ द्रुतमार्गका नाममा विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९७.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवमा आयोजनाको कुल अंशको थप ५.१ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
असार मसान्तसम्म आयोजनाको कुल कामको १६.२१ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जसअनुसार भौतिक प्रगति लक्ष्य अनुसार छ भने खर्च हुने कुल रकमको १४.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
द्रुतमार्गको डिजाईन तथा कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तथा स्थानिय विषय विज्ञहरु छनौट गरी सर्भेलगायतका काम सुरू भइसकेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै आयोजनास्थलमा १४ वटा बेलिबृज जडान गर्ने योजना छ । हालसम्म १४ मध्ये ८ वटा बेलिबृज जडान गरी सञ्चालनमा आइसकेकका छन् । पुल तथा सुरुङ्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग निर्माण कार्य जारी छ ।
आयोजनाको ५ स्थानमा बेसिक ल्याब इक्वपमेन्ट जडान गरी गुणस्तर परिक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसमा परामर्शदाताको परामर्शअनुसार एड्भान्स ल्याब इक्विपमेन्ट समेत थप गरिएको छ ।
यता जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धि काम पनि सकिने क्रममा छ । हालसम्म ९१.५ काम सकिएको सेनाले जनाएको छ । खोकना-बुङमति ईलाकामा रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उप-समिति गठन गरी आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको सेनाको दाबी छ ।
यसैगरी रुख कटान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काम पूर्णरूपमा सकिएको छ । रुख कटान भएअनुसार १:२५ को अनुपातमा वृक्षारोपण गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म २ लाख ४९ हजार १ सय ६६ वटा रूख रोपिएको छ ।
आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सुरुङ्ग मार्ग र पुल निर्माण सम्बन्धमा केही परिमार्जन भएअनुसार पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति पनि भइसकेको छ ।
सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको हो । सेनाले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक समयमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।